Voka-pifidianana vonjimaika: mirona mankany amin’ny fandresen-dRajoelina | NewsMada
Voka-pifidianana vonjimaika: mirona mankany amin’ny fandresen-dRajoelina
Mitohy hatrany ny famoahan’ny Ceni ny voka-pifidianana vonjimaka tamin’ny fihodinana faharoa, ny 19 desambra teo. Mirona mankany amin’ny fandresen-dRajoelina hatrany izany.
Tsy misy fiovana firy na manomboka midina avy aza ny vokatra azon’ny kandidà roa tonta. Mbola mitarika mazava amin’ny elanelana lavitra ny kandidà Rajoelina, raha mitaha amin’ny kandidà Ravalomanana miainga amin’ny voka-pifidianana, hita tao amin’ny tranonkalam-pifandraisan’ny Ceni, omaly tamin’ny 7 ora hariva sy enina minitra. Nahazoana vokatra ny Birao fandatsaham-bato (BV) miisa 4840 amin’ny BV 24 852 manerana ny Nosy. Izany hoe eo amin’ny 19,48% amin’ireo BV izany. Nahatratra 28 822 ny vato fotsy sy tsy manankery raha 47, 11% ny taham-pahavitrihana. Nahazo ny isam-bato 610 514 ny kandidà laharana faha-13. Izany hoe nibata ny salanisa 54,24% raha 515 055 ny vato azon’ny kandidà laharana faha-25. Nahazo ny salanisa 45,75%.
Mialoha ny 25 janoary ny voka-pifidianana ofisialy
Tsiahivina fa tafakatra hatrany amin’ny 64% mahery ny azon’ny kandidà Rajoelina ny harivan’ny fifidianana hatramin’ny omaly maraina raha teo amin’ny 35% kosa ny vaton’ny kandidà Ravalomanana. Manomboka tonga tsikelikely izany ny voka-pifidianana rehetra ka manova sy hampihena ny vaton’ny mpifanandrina roa tonta avy.
Na izany aza anefa, mbola voka-pifidianana vonjimaika ihany ny eo anivon’ny Ceni. Mazava ny nambaran’ny HCC, tompon’ny teny farany amin’ny voka-pifidianana ofisialy fa mialoha ny 25 janoary ny hanapoahan’izy ireo tanteraka izany.